Chihuahua Imbwa FAQs uye Inobereka Ruzivo - Inobereka
Chihuahua Imbwa FAQs uye Inobereka Ruzivo
Chii chinonzi Chihuahua
'Kundiziva ndiko kundida.' - Chirevo chaChihuahua, dai vaigona kutaura.
Iyi FAQ yakanyorerwa vese varidzi vane ruzivo uye zvakajairika kuverenga mufungwa. Ndokumbira utarise kuti Iyo Chihuahua FAQ ndeye tungamira chete , uye inofanirwa HAPANA kutsiva veterinarian kuraira uye / kana zvimwe zvine chiremera zvakaburitswa mabasa akanyorwa pane iri rudzi.
Sezvo ini chete ndine ruzivo rwekuva muridzi Poshi Chihuahua, ndingafarire mhinduro kubva kune vamwe varidzi veChihuahua.
GUSH MODE ON: Kana iwe uchitova neChihuahua, saka ndinenge ndichiparidzira kune vakatendeuka kana ndichiti ivo ndevamwe vakavimbika, vane moyo munyoro, uye vanyoro vemhando dzekutambisa. Iyo Chihuahua, neayo apuro-dhehenya uye maziso makuru anovhenekera, inogona kupfeka kutaura kunoshamisa kwevanhu pane dzimwe nguva; iye kana iye achazoda kuve newe zvakanyanya, kana asiri ese, enguva. Yambiro kune varidzi vembwa zvakajairika: Usatenge Chihuahua kana iwe usina chaicho chivimbo chivakwa mumoyo mako kana nguva yerudo rwakazara uye kutarisisa kweuyu mudiki ane furry. GUSH MODE YAKABVA.
Kuchengeta uye Kugadzirisa
Matambudziko Akakosha Ekurapa
Zvivezwa zvakawanikwa muMonastery yeHuejotzingo, mumugwagwa mukuru kubva kuMexico City kuenda kuPuebla, zvinopa humbowo hwakasimba nezvekwakabva Chihuahua. Monastery iyi yakavakwa nemaFranciscan Monks kuma1530. MaMonks akashandisa matombo kubva ku Toltec budiriro.
Chinyanyo kuzivikanwa nezveToltecs, asi isu tinoziva kuti ivo vaivapo pakutanga kwezana ramakore rechi9 AD mune izvo zvino zvava Mexico. VaToltec vaive nerudzi rwembwa yavaidaidza iyo “Techichi” . Uye zvakavezwa pamatombo paHuejotzingo zvinopa kuzara musoro kuona uye mufananidzo wembwa yese iyo inonyatsofanana neazvino chihuahua.
Kubva pane humbowo uhu, tinogona kufunga zvakachengeteka kuti Chihuahua chizvarwa cheTechichi.
Pamusoro pezvo, pane zvakasara kune mamwe mapiramidhi uye zvimwe zvinongedzo kuhupenyu hwekutanga hweTechichi kuChichen Itza muYucatan.
Iyo Techichi chaive chinodikanwa chechitendero pakati pemadzinza ekare eToltec uye gare gare pakati pevaAztec. Vanochera matongo vakawana zvisaririra zverudzi urwu mumakuva emunhu kuMexico nemumativi eUnited States.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve chinamato uye ngano basa reTechichi mumadzinza eToltec, ini ndinokurudzira IAmerican Kennnel Club's Official Breed Book (ona Mabhuku).
Chihuahua wekutanga kunyoreswa zviri pamutemo neAmerican Kennel Club yaive 'Midget' muna 1904.
Chihuahuas dzinoenda pasi pechirongwa che 'matoyi emhando.' Ndirwo rudzi rudiki rwembwa pasi rose. Ivo, kutaura zvazviri, ivo chete 'zvakasikwa' mhando yekutambisa. Ndokunge, ivo zvakasikwa zvidiki uye havasi mhedzisiro ye 'kuberekesa-pasi' mikuru mikuru, sezvakaita mamwe matoyi emhando.
Chihuahua inogona kuve yakatsetseka majasi kana marefu majasi. Sezvineiwo, hapana musiyano wekuberekana wakaitwa pakati pezviviri muUnited States, nekuti muAmerica, zvese zvakatsetseka nejasi refu zvinogona kuitika mumarara; zvisinei, muUnited Kingdom, majasi akatsetseka uye majasi akareba anoonekwa semhando mbiri dzakasiyana uye haatombopindirana.
Mhando yekuzvarwa, yakatenderwa Nyamavhuvhu 11, 1990 inokanganisa chero imbwa inopfuura mapaundi matanhatu kubva kuchindori chechisimba; zvisinei, vanogona kuyera kusvika mapaundi mapfumbamwe kana kupfuura.
Zvakare, Chis inogona zvakare kuve diki zvakanyanya pane yemhando yekubereka. Tarisa uone iyo Teacup Chihuahua , Semuyenzaniso; kunyange vakakura zvakakwana, imbwa idzi dzinorema isingasviki mapaundi mana.
Chimwe chezvinhu zvakasarudzika zveChihuahua musoro wayo, uyo wakakomberedzwa uye unotaurwa nevanochengeta se 'apple-dome' mhando dehenya. Mukupesana, tomu rake rinoshamisira zvisingaenzaniswi. Mhuno dzepingi dzimwe nguva dzinowanikwa pane blonde Chihuahuas.
Vamwe Chis vane chimiro chakasiyana zvakasiyana chemusoro; imbwa idzi dzinozivikanwa se Deer Musoro Chihuahuas . Mukupesana ne'Apple Musoro 'Chihuahuas, anova ndiwo mwero wekuberekesa, maDeer Heads ane akawanda ehembe yakatetepa, mitsipa mirefu, uye mbichana dzakareba zvakare.
Chimwe chakasarudzika chimiro cheChihuahua idzo nzeve: hombe, dzakabatwa dzakatwasuka, uye dzichipenya kumativi pakona yemadhigirii makumi mana nemashanu, iyo Chihuahua inoshandisa nzeve dzayo kuratidza akasiyana manzwiro nemhinduro.
Iwo maziso, kazhinji akasviba uye anopenya, akafara-akaiswa. Zvekare, blondes inogona kunge iine akareruka maziso. Misodzi inowanzo kuburitswa muhuwandu kuti maziso makuru arambe achizorwa, uye hazvishamise kuti misodzi ibhururuke kubva kumeso kwaChihuahua painodzungudza musoro panguva yekutamba.
Musana unofanirwa kuve wakaringana uye mbabvu-keji yakakomberedzwa. Mamwe maChihuahuas anogona kunge aine mabhegi-akaumbwa-mabharanzi, asi vafudzi vanehunyanzvi vanoona izvi zvisingafadze. Iyo yekumashure ine mhasuru uye yakaonda.
Chihuahua ine makumbo-akafanana nemakumbo uye tsoka dzakatsvuka. Mboro inoreba kutakurwa kungava nejere kana kuti muchiuno nechitupa chinobata musana.
Chekupedzisira, jasi reruvara: kune akasiyana mavara, anosanganisira brindle, blonde, dema, brown, fawn, bhuruu, uye 'kupenya.' Zvinonakidza kucherechedza kuti Mexico inosarudza iyo jet nhema ine mamaki emate, uye nhema uye chena zvine mavara. United States inosarudza zvakanyanya mavara akasimba, kunyanya fawn.
'Chis hadzisi imbwa, ndinogutsikana - vana vane makumbo mana.' - kubva CHIHUA-L
Ini ndinonzwa kubva kune vane ruzivo Chihuahua varidzi kuti imbwa yega yega yerudzi urwu ine yavo yakasarudzika hunhu; ichi chizvarwa chakazvimiririra kwazvo. Nekudaro, mashoma generalizations anogona kuitwa. Chihuahuas anofadza, ane simba, uye anokurumidza kufamba-canines.
Ivo vagara vachirondedzerwa sevane 'terrier-senge' hunhu; ndiko kuti, hunhu hwekuva vakasvinura, kucherechedza, uye kuda kushamwaridzana nevatenzi vavo. Ivo vakavimbika zvakanyanya uye vanonamatira kune mumwe kana vaviri vanhu.
Idzi imbwa diki hadzinyatso ziva yavo yekudzikira chimiro: vanogona kushinga nedzimwe imbwa dzakakura kwazvo kupfuura ivo, uye kudzivirira vatenzi vadzo. Ivo vakavimbika zvakaomarara kune vanatenzi vavo uye vanonetseka nezvevose vausingazive kana vashanyi vatsva vakaunzwa mumba, izvo zvinocherechedzwa neChihuahua seyayo dunhu.
Nezvikonzero izvi, maChihuahuas vanoita zvakanaka vatariri (kwete imbwa dzinorinda, zvakadaro!).
Iyo Chihuahua inoda yakawanda yekubata kwevanhu: kubata, kubata, uye kutarisisa kwakawanda. Kana iyo Chihuahua ikasawana izvi, iye kana iye anozoshandisa dzakasiyana siyana kutarisisa-kutora matipi kusvikira iwe uchimupa iye / kutarisisa kwake.
(Ini zvangu ndinoshandisa makumbo ake kukwenya ruoko rwangu zvishoma, mucherechedzo unoti, “Ndimbundire zvino!”) Vamwe varidzi vakave nemamwe, mamwe marudzi akazvimiririra vanogona kuwana maChihuahua achidawo.
Nekudaro, Chis ipa yakawanda rudo uye chidakadaka mukudzosera kwako kutarisira.
Kuchengeta kanopfuura kamwe Chihuahua kunogona kudzikisira imbwa kunetseka kana ikasiiwa yoga zuva rega rega kana muridzi achishanda. (Vachakwikwidzana kuti utarise paunosvika kumba, zvakadaro!)
Nekuti ivo nehunhu vakapfava, vakavimbika, uye vane moyo munyoro, maChihuahuas akakodzera kune vasina kuroora, vakwegura, vakaremara, uye vanovhara.
Ivo vanokuchengeta iwe kushamwaridzana kwemaawa nekurara pamakumbo ako kana padivi pemotsi yako kana uri pamubhedha, uye vanokubata iwe sehumambo. Hapana munhu ane Chi mumba mavo achazombove ega!
Chihuahuas rudzi rwakanaka kune vanogara-mumaguta kana avo vasina nguva yekufamba imbwa dzavo kazhinji. Ivo vanofara kwazvo mumafurati, sekureba sekunge paine zvakakwana zvekutamba navo uye kuongorora. (Vanoda kuongorora senge imbwa zhinji.)
Mifungo kubva kuvakuru vembwa inosiyana pane kangani kushambidza Chihuahua. Vamwe vanoti kugezesa kazhinji kunobvisa mafuta echisikigo kubva mujasi, uye nekudaro dandruff inozoguma uye jasi racho rinoita serakasviba. Vamwewo vanoti kugezesa dzimwe nguva nemamwe maronda eshambuu kunogona kunyatso kuwedzera kubwinya kwejasi.
Zvave zviri chiitiko changu kuti maChihuahuas anofanirwa kushambidzwa kanokwana kamwe pamwedzi, zvikasadaro vanokura kunhuwirira kusingafadzi. Izvi zvinonyanya kukonzerwa nemaseru eganda ayo vanhu vanotsvedza kuenda paChihuahua!
Saka vanhu ndivo vanonyanya kupa kune iyo hwema iyo inogona kukura.
Kana uchigeza, chenjera kuti usapinza mvura munzeve dzavo, sezvo hutachiona hunogona kukura.
Sezvo maChihuahua achinyanya kuve chipfuwo chemumba, iwe uchafanirwa kucheka nzara dzawo kamwe chete pamwedzi. Pane diki Chis, katsi inocheka zvigadziriso zvinogona kushandiswa. Izvo zvakanaka kutanga nzara-yekucheka maitiro kutanga-on kuitira kuti imbwa yako ijairire kubata kwako makumbo ayo (tisingatauri kujairira kune makuru anopenya maclippers!).
Iwe unofanirwa kubvunza veterinarian wako nezve izvo zvinodikanwa zvekudya zveChihuahua yako. Zvinoenderana nemamwe emabhuku ekuchengetedza imbwa andakatarisa: mushure mekurumwa (kusvika kumavhiki matanhatu), mbwanana dzinofanirwa kupihwa kudya katatu pazuva kusvika pamwedzi mitatu; kubva pamwedzi mitatu kusvika kumwedzi mitanhatu vanofanirwa kupihwa kudya katatu pazuva, uye kubva pamwedzi mitanhatu kusvika pagore vanofanirwa kudyiswa kaviri pazuva. Mushure megore rimwe, kamwe chete pazuva zvakanaka.
Nekudaro, chave chiri chiitiko changu kuti kunyangwe mukukura, Chihuahuas vanosarudza zvidyiwa zvidiki zvinoverengeka kupesana nechikafu chikuru chimwe pazuva. Ndakaona kuti chenguva dzose chikafu chembwa chevakuru chakangonaka kune irudzi urwu.
Chikafu chakaomeswa kana musanganiswa wechikafu chakaomeswa nechikafu chemumagaba chakanakirwa nekuti mune zvimwe zviitiko chikafu chemumagaba chinonetsa kuti rudzi urwu ruchere (zvichikonzera manyoka).
Kufanana nembwa dzese, Chihuahuas anokoshesa 'kubata.' Ive nekuchenjerera, zvakadaro, mukusarudza kwako. Aya anotevera anobata, mune zvidiki zvidiki, anobatsira semubairo kana uchidzidziswa kana seyakajairika yakasarudzika zvidyiwa: chizi, Alpo snacks, mbishi-makanda, Bonz, nzungu ruomba.
Nekudaro, chenjera kuti usanyanya-kuzadza nezvikafu zvishoma, sezvo kuwandisa kuri njodzi yehutano kune imbwa zvakajairika.
Bvunza veterinarian wako panguva yekuchenesa nzeve dzako dzeChihuahua nemeno, booster shots, uye majekiseni.
Iko kune yakanakisa webhu sosi yeyakajairika hutano kuchengetwa kwembwa, inonzi 'Hutano Kuchengetedza Nyaya'. Nekudaro, ndapota cherekedza gwaro iri harisi chinotsiva kugara uchiongorora zvipfuyo uye kutarisisa matambudziko ehutano.
Varidzi vanofanirwa kuziva kuti maChihuahuas anowanzo 'tenderera pamabvi.' Izvi zvinogona kuitika sezvavanokura. Kana zvichikonzera kunetsa kufamba, tora imbwa yako kuna vet.
1. Chihuahuas haisi kudhura here?
Kana ivo vaine yavo American Kennel Club yepamutemo chitupa mapepa, hongu - vanogona kumhanyisa anosvika kumadhora mazana matanhatu emadhora. Mapepa (ayo anopa mubereki) zvinoreva kuti vabereki veChi vako vakanyoreswa neAKC uye kuti mbwanana inogona kunyoreswa.
Pamusoro pezvo, vamwe vafudzi vanopa madzitateguru mapepa anoteedzera nhoroondo yemhuri kupfuura vabereki vepedyo. Aya mapepa akakosha kana iwe uchironga kuisa imbwa yako nyowani mumitambo uye makwikwi.
Izvi zvitupa nemapepa zvinovimbisa kuti imbwa iri yemhando chaiyo; zvisinei, ini ndinokurumidza kuwedzera kuti nekuda kwekuti imbwa ine mapepa, hazvireve kuti inokodzera yemitambo uye makwikwi. (Ona AKC Chihuahua Breed Standards.)
Pamusoro pezvo, mapepa haavimbise kuti kubereka Chis kwaichengetwa zvakanaka kana kuti havana hutachiona.
VaChihuahuas vasina mapepa avo havana kunyanya kusiyana nevaya vane mapepa. Uyezve, ivo vanogona kutengwa kune zvakati wandei. (Ndakatenga yangu ye $ 200.00 pasina mapepa.)
Marli Medinnus, anga achichengeta Chihuahuas kwemakore gumi nematanhatu, akatumira tsamba kwandiri:
Mapepa haana kukosha, asi kusangana nemufudzi nekuona mamiriro akasimudzwa imbwa iri. Iwe unofanirwawo kutarisira kuona vabereki (kana amai vacho) vembwanana yauri kufunga kutenga kuitira kuti ugone kuona kuti vabereki vakanaka uye vanehunhu hwakanaka.
2. Ndeipi nguva yavo yehupenyu?
Zvidhori zvezvipfuyo zvinogara zvakareba kupfuura chero saizi imbwa. Tarisira hupenyu-hwakareba makore gumi nemasere kusvika gumi nemasere, kunyangwe iyo yekupedzisira isingawanzo.
3. Vanoda kurovedza muviri zvakadii?
Kwete zvakawanda. Rudzi ruduku urwu rune mabhureki mapfupi esimba zuva rega rega ayo anokurumidza kufa. Iwe unofanirwa kupa matoyi eChi yako kuti igare ichigara. Tsaru slippers dzakaringana, pamwe neyakaiswa matoyi ane anokwenenzvera mukati. Iwe unogona zvirokwazvo kutora yako Chi kufamba. Iwe unozoita vazhinji vanozivana nekuda kwekudzikira uye kusingawanzo kuoneka kweChihuahua chako!
Paunenge uchitenga leash kune yako Chihuahua, yeuka kuti mutsipa wayo uri padiki uye wakaomarara uchienzaniswa nedzimwe mitsipa yembwa. Iwe haugone (uye, zvirokwazvo, haufanire) kukanda imbwa yako kutenderedza neleash kana iye / aine kora yemutsipa pa.
Ini ndinokurudzira iyo yemuviri-sunga nekuda kwezvikonzero zviviri: kuchengetedzeka uye kunyaradzwa. Kana yakaringana kurudyi, ichapa yako Chi kufamba kwakachengeteka uye kwakasununguka, uye mabhanhire anovimbisawo kuti imbwa yako haikwanise kutiza - kunetsekana chaiko kana uchigara mudhorobha.
Kune mhando mbiri dzemuviri dzakasungwa: imwe mhando inoenda pamusoro pemusoro wembwa uye mabhureki pasi petambo mune H-dhizaini. Izvi zvakanaka, asi tambo yakatonyanya nani ndiyo Y-dhizaini, iyo isingabatidze huro zvachose.
4. Zvinoda chikafu chakakosha chembwa here?
Kwete. Vane zvinodiwa zvinovaka muviri sembwa zhinji. Ini ndinodyisa yangu yenguva dzose Alpo kibbles, uye, kunyangwe iwo mabhuru ari makuru, yangu Chihuahua inoita kunge inonakidzwa nekutyora yega yega neshaya dzayo.
Chihuahuas vanosarudza zvidiki zvidiki pazuva, pane kudya kumwe kukuru. Ini ndinosiya mbiya yemabubbles kunze kweangu Chi uye iye anoita kunge anodya anenge matatu madiki madiki pazuva.
5. Ndanzwa kuti vane kutya, imbwa dzine mitsetse. Ichokwadi here ichocho?
Ehe, imbwa dzakakoshwa-pamusoro. Ini ndinotsanangudza 'yakakwenenzverwa' seinotevera: kuhukura zviri nyore, hakuchinjike zviri nyore kuchinja mune zvakatipoteredza, anofungira vausingazive uye anozovahon'era pavari, uye anopoterera mumatenderedzwa nekusvetuka-svetuka paunofara (senge paunodzoka kumba mushure memashanu -minute kusavapo, semuenzaniso).
Zvisinei, nemunhu wavakabatana naye (kureva., tenzi wavo), havaratidze huzhinji hwehunhu uhu; muchokwadi, vanoratidza hunhu hwakasiyana. Chihuahuas ndeyechokwadi 'Jekyll-and-Hyde' yemhando dzembwa: shamwari dzako dzichaona divi rakaipisisa uye hadzimbokutenda iwe paunodziudza kuti yako Chi imbwa nyoro, inotapira-yakasikwa imbwa.
Kune mashoko akanaka, zvakadaro. Kana iwe ukafambidzana neChi wako pazera diki, ivo vanozove vasina kushushikana kana nharaunda nyowani nevanhu vakaunzwa kwavari mukukura. Kufambidzana kwakanaka kwakakosha, saka, uye pazera rekutanga zvinogoneka.
6. Ivo vakanaka nevana here?
Kazhinji, kwete. Ive nekuchengera kana uchifamba neChihuahua chako kuti uchengetedze yako Chi kure kure nevacheche uye vana vadiki, avo vanowanzo dzivirirwa uye vanosvika imbwa yako.
Zvekare, iri izano rakanaka rakajairika; mamwe maChihuahuas ane hushamwari akatenderedza vana (kazhinji semhedzisiro yekudzoreredzwa). Muchiitiko ichi uye nevamwe, ruzivo rwatenzi rweChihuahua chake uye kutonga kwakanaka kunofanira kukunda.
7. Ini handi allergic kune imbwa, asi ndakanzwa kuti maChihuahuas haazondinetse; ichokwadi here?
Mifungo inoita kunge inosiyana pane iyi pfungwa. Vamwe vanoti inyaya yevakadzi-vekare, nepo vamwe vachipika kuti, kunyangwe ivo vari vega kune imbwa, Chihuahuas haina kuvanetsa.
Nzira yakanakisa yemunhu ane allergies kuti aone kana vachigona kuva neChihuahua ndeyekuti vangoshandisa imwe nguva kutenderedza imwe. Vamwe vanhu vanowedzerwa nevhudzi rembwa, nepo vamwe vari kukanganiswa nemate.
Sezvo zvaChihuahua zvinozivikanwa kunanzva huso hwatenzi wavo zvakanyanya, iwe unenge uine chokwadi chekuti hausi weergori kune vekupedzisira usati waisa mari murudzi urwu.
Ini ndaive neemail tsamba kubva kuna Ernest Lowell pane iyi nyaya, uyo anowedzera kuti:
Kana Chihuahua ikaitika ku 'shanda' kune vamwe vanhu vasina kukakavara, zvakanaka, asi zvinowanzoitika kuti munhu anorwara achada kuberekerwa nejasi / rakamonana bhachi pamwe pasina jasi: poodles, bichons, uye mamwe ma terriers. Kunyangwe iwo mabhebhi haashande kune vamwe vanhu venyama, saka zvinoenderana nemunhu.
8. Ndeupi mutsauko uripo pakati pemajazi anotsvedzerera uye majasi akareba?
Nyaya yekuti pane kana musiyano mune hunhu inoratidzika kunge iri nyaya yekukakavadzana mukati memunharaunda yeChihuahua. Vamwe vanoti hapana mutsauko pahunhu; vamwe vanopika kuti majasi marefu ane tsika yeku 'nyoro-nyoro' nepo majasi akatsetseka achiwanzo kuita hunhu hwehasha.
Ngatiisei padivi nyaya yehunhu uye titarise panyama uye nekuchengetedza misiyano.
Smoothcoats anowanzove ane majasi ayo akawandisa kupfuura ehembe refu - angangoita kunge bristles mune dzimwe nguva. Smoothcoats zvakare anodurura kupfuura marefu majasi.
Nekudaro, marefu majasi unokwanisa rakadururwa zvakare. Yakaputirwa refuhahairs inoda kukwesha kanenge kamwe pamwedzi, asi ichi chingave chiitiko chinonakidza kune vese Chi uye tenzi pane kuita basa.
Kana iri nyaya yekugeza, semutemo wenguva dzose, majasi refu anofanirwa kugezwa kakawanda, uye ichave yakareba nzira (zvese kuwacha uye kuomesa). Iyo bhibhi - iyo furry chikamu chechipfuva - inogona nyore kuwana yakasviba uye kukwirisa. MaLongcoats anogonawo pano neapo kuita kuti tsvina inamatire pa 'bhurugwa' ravo. Iwe unofanirwa kugezesa imbwa yako kana kucheka zvishoma nekasi kana izvi zvikaitika.
Vamwe varidzi veChihuahua vanopika nevhudzi refu uye vangadai vasina chimwe chinhu; ingori nyaya yekuravira kwega sevara rejasi.
9. Zvakachengeteka here kutora yako Chihuahua pane inotonhora mamiriro ekufamba?
Varidzi vanofanirwa kuve nehanya nenyaya yekuti maChihuahuas ane bvudzi pfupi, uye kunyange nevhudzi refu, vari panjodzi nechando. Mumatembiricha e35-40 degrees Farenheit, ini ndaikurudzira kupfekedza yako Chihuahua mune yakakosha juzi juzi kufamba pfupi.
Kufamba yako Chihuahua mune tembiricha pazasi 35 degrees Farenheit iri zvine simba kuora mwoyo, kunyanya kana paine mhepo-chill chinhu. Mune izvi, semamwe mativi ekuchengetedza imbwa, chengetedza imbwa dzako hutano hwepamusoro, kwete chako chishuwo.
Mune dzimwe nzvimbo dzinotonhora, hita yemukati inofanirwa kuchengetedza Chi yako kugadzikana.
10. Vanoshamwaridzana nedzimwe imbwa here?
Kazhinji kutaura, kwete. Nekudaro, pane zvakawanda zvakasarudzika uye vanhu vazhinji vakandinyorera vachindiudza nezve kungwarira kwavo Chihuahua kune mamwe marudzi. Saka ndinofarira kutaura kuti Chihuahuas zvinogona kuva inofarira kwazvo uye ine hushamwari kune dzimwe imbwa.
Chis vari vanoshamwaridzana kwazvo nerudzi rwavo. Saka maChihuahuas akati wandei anogona kunge achifara kugara mumhuri imwechete. Izvi zvinosanganisira vaviri kana vanhurume vanogovana imba imwechete.
11. Ko maChihuahuas haasi erudzi here?
Zvinonzwisisika kuti rudzi urwu rwakasimudzira sei mukurumbira uyu. Mune ruzhinji, vamwe vanohukura pakutsamwiswa kudiki, uye hazvingamire dzimwe nguva kunyangwe 'kutyisidzira' kwaenda.
Chihuahuas zvirokwazvo akachenjera kwazvo uye akangwarira marudzi.
12. Chihuahuas inogona kudzidziswa here?
Sezvo iwe ungafungire kubva pamhinduro kusvika panhamba pfumbamwe pamusoro, hongu, ivo vanogona kudzidziswa. Chinangwa cheiyi FAQ hakusi kutsanangura kana kutsigira chero nzira yekudzidzisa, kunyanya sezvo paine zvimwe zviwanikwa pa internet zvinobata nemusoro wenyaya uyu zvakanyanya.
Rimwe gwaro rakadai, 'Kudzidzisa Imbwa Yako,' rinogona kuwanikwa paWorld Wide Web pa https://k9web.com/dog-faqs/training.html.
13. Chihuahua wangu imbwa here kana kuti mole?
Icho chimiro cheChihuahua kusarudza kurara pasi pejira kana gumbeze. Ivo vanozotopinda pasi pemapiro kuitira kuti vanzwe kunhuwa.
Kana iwe urikurera mwana, ita shuwa yekuvapa rakapfava tauro kana gumbeze munzvimbo yavo yekurara kuti vagone kupinda pasi payo.
Saka usazoshamisika kana Chihuahua chako chichikwenya pasi pemagumbeze ako husiku, kunyangwe imba yako kana imba yako isingangotonhora zvakanyanya. Izvi zvinozivikanwa se 'moley-athari.' (1).
14. Chihuahua wangu anotarisira zuva here?
Chihuahuas ndivo vanonamata zuva. Vanosarudza kugara muzuva kwemaawa uye vanozivikanwa kuti vanovata panzvimbo yezuva isina kukura kupfuura saizi yedhora (2).
Nehurombo, ivo havana njere mune izvi uye vanogara muzuva kunyangwe panotanga kufema. Tarisa yako Chihuahua mune inopisa mamiriro ekunze kuti uve nechokwadi chekuti havatambure nekupisa sitiroko.
15. Kubvunda kwangu kwaChihuahua. Izvi imhaka yekuti ari kutonhora here?
Chihuahuas dzinodedera kana dzichitonhora, asi zvakare dzinodedera pavanenge vakangwarira, kufara, kusafara, kana kutya. Ichi chigumisiro chekuva nemetabolism yakakura, uye hunhu chaihwo hwerudzi urwu.
16. Kune here kune Chihuahua tsamba yekutumira?
Ehe. CHIHUA-L ndeyekukurukurirana kwezvinhu zvese zvekuve nekutarisira Chihuahuas. Kana iwe uri kufunga nezve kutenga imwe, iri ishamwari, rakanyatsoziva boka iro rinogona kumisa mibvunzo yako.
17. Pane peji reChihuahua Peji here? Mamwe ruzivo rwepamhepo?
Ehe. Inochengetwa naJosh Peck (jbpeck@icon-stl.net). Iyo URL iri:
Kufanoyambirwa: mazhinji acho ingano, asi zvese zviri muzita remufaro wakanaka.
Uyezve, funga zvinotevera:
Chihuahua Web Mhete
18. Kune here Chihuahua Kununura nzvimbo?
Ehe. Iro zita nekero yeNational Chihuahua Breed Kununura Sachigaro ndi:
1004 muWillow Street
Foni yacho ndeinoti: 408-251-6470.
Kuti uwane nzira yekuwanazve gwaro rinonyora masangano ekununura eChihuahua, ona Internet Resources (pazasi). Vaverengi vanotungamirwawo kuboka renhau rec.pets.dogs.rescue yeruzivo.
19. Kune here akawanda maChihuahua mazambuko kunze uko?
Nekuda kwehukuru hwavo hudiki uye hunhu hunhu, maChihuahuas anowanzo shandiswa mukugadzira imbwa dzekugadzira. Heano mamwe akakurumbira eChihuahua musanganiswa iwe aunogona kuwana nhasi:
Chiweenie : Chihuahua uye Dachshund Sanganisa
Chipit : Chihuahua uye Pitbull Sanganisa
Chorkie : Chihuahua uye Yorkshire Terrier Mix
Shichi : Shih Tzu Chihuahua Sanganisa
Pomchi : Pomeranian Chihuahua Sanganisa
Chug : Chihuahua Pug Sanganisa
Jack Chi : Jack Russell Chihuahua Sanganisa
Chigi : Corgi Chihuahua Sanganisa
Chipoo : Chihuahua uye Poodle Sanganisa
Chihuahua sanganisa shavishavi
Goridhe Retriever Chihuahua musanganiswa
Kune mamwe maChihuahua Terrier musanganiswa, isu tine chinyorwa zve izvo, futi.
Ziva Kuziva iyo Airedale Terrier
Mop Imbwa Zvese Zvaunoda Kuti Uzive Nezve A Komondor
border collie australian sheperd musanganiswa
chokwadi nezve imbwa huru dze pyrenees
marii anoita bulldog yeFrance
dachshund dema uye tan ine wirehaired
teacup poodle yakazara saizi yakakura